अशोक दर्जीको घरमा ४३ इन्चको टिभी, सोफासेट, डाइनिङ टेबल, दराज, पलङ, लगायतका बहुमुल्य फर्निचरहरु ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
अशोक दर्जीको घरमा ४३ इन्चको टिभी, सोफासेट, डाइनिङ टेबल, दराज, पलङ, लगायतका बहुमुल्य फर्निचरहरु !
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७५, मंगलवार
भाद्र ५, काठमाडौं । सानो उमेरमा गायनमा अद्भुत क्षमता भएका कारण छोटो समयमा चर्चित बनेका बाल गायक अशोक दर्जी र उनको परिवारको नै भाग्य फेरिएको छ । बाटोमा, होटलमा गीत गाउँदा उठेको थोरै रकमले परिवारकै गुजारा गर्ने टिठ लाग्दो टहरोमा बस्दै आएका दर्जी परिवार हिजोबाट सुविधायुक्त पक्की घरमा बस्न थालेको छ ।
केही महिनासम्म सडकमा गीत गाएर पैसा माग्दै हिँड्ने बालक अशोक दर्जी र उनको परिवारको भाग्य फेरिएको छ । टहरोमा बस्दै आएको उनको परिवार हिजोबाट सुविधायुक्त नयाँ पक्की घरमा सरेको छ ।
घर मात्र नभएर घरभित्रका सम्पूर्ण फर्निचरहरुको पनि व्यवस्था गरिदिएको बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार घरमा ४३ इन्चको टिभी राखिएको छ । यसैगरी होम थिएटर पनि बनाइएको छ । सोफासेट, डाइनिङ टेबल, दराज, टि९टेबल, पलङ, डाइनिङ टेबल लगायतका फर्निचरहरु पनि छन् । किचेनमा पनि फ्रिज, राइस कुकर, प्रेसर कुकरदेखि झर्काको थालसम्म खरिद गरेर दिइएको छ ।
घर निर्माणका लागि दाताहरुबाट २१ लाख रुपैयाँ जुटेको उनले जानकारी दिएका छन् । यसैगरी यूट्यूवमा पोष्ट भएका अशोकको भिडियोबाट ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । घर हस्तान्तरण गरिसकेर अशोकको खातामा १९२ लाख वचत हुन सक्ने बुढाथोकी बताउँछन् ।